एक बर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरु राजनीति स्वार्थपूर्ति नभएपछि एक महिना मै सरुवा| Corporate Nepal
एक बर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरु राजनीति स्वार्थपूर्ति नभएपछि एक महिना मै सरुवा
भदौ १३, २०७६ शुक्रबार ०९:१०
काठमाडौं । १५ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । प्रधानमन्त्रीले तालिका नै बनाएर आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे ।
तर, कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी नसुक्दै सरकारले २ भदौमा एकैचोटि १६ सचिवको सरुवा गरेको छ । जसले सरकारको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । मन्त्रीको लहडका कारण कतिपय सचिवहरूको डेढ महिनाकै अवधिमा पनि सरुवा भएको छ । मन्त्रीले चाहँदा रहने र नचाहँदा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सचिवहरूको मनोबल खस्किने गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम गर्न अस्वीकार गर्दा पनि सरुवा गरिने गरिएको कतिपय सचिवहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको चुनावताका निर्वाचन आयोगमा सचिव थिए, गोपीनाथ मैनाली । निर्वाचन खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन खोज्दा सरकारले उनको सरुवा गर्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर भूमिकाविहीन बनाइयो । मैनालीले यो विषय सार्वजनिक रूपमै बोले । त्यस्तै, तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा ६ फागुन ०७५ मा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यतिवेला उनले ‘भारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बस चीनबाट ल्याएको भनेर प्रमाणित गर्न नमान्दा सरुवा भयो’ भन्दै गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नौ महिनामै चार सचिव
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्लो नौ महिनामा चार सचिव फेरिएका छन् । गत मंसिरमा स्वास्थ्यसचिव बनेका केदारबहादुर अधिकारी माघमै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भए । वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे स्वास्थ्यमा तानिए । तर, घिमिरे पनि अढाई महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन्, वैशाखमै महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यसपछि आए अर्का सचिव रामप्रसाद थपलिया । तर, २ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । शिक्षासचिव खगराज बराल स्वास्थ्यमा आएका छन् ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा रोजेअनुसारका मन्त्रालय
कर्मचारी सरुवाको मुख्य कारण राजनीति नै हुने गरेको छ । कुनै राजनीतिक दलनिकट भएकै आधारमा सचिवहरूले आफूले रोजेअनुसारका मन्त्रालय पाएका छन् । कतिपय मन्त्रालय यस्ता पनि हुन्छन्, जहाँ राजनीतिक आस्थाविना पुग्नै गाह्रो हुन्छ । पछिल्लो समय नेकपानिकट भएकै आधारमा प्रेमकुमार राई, वैकुण्ठ अर्याल, महेश दाहाल, खगराज बराललगायतले रोजेको मन्त्रालय पाएका छन् । कतिपय सचिव यस्ता पनि छन्, जो पैसा र शक्तिका आधारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय जान्छन् ।
एकैपटक छ दर्जनभन्दा बढि सहसचिवहरूको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
साधना लघुवित्तमा सहायक अधिकृतसहित विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसर
एचआर मिट सम्पन्न, विभिन्न विधामा कम्पनीहरू पुरस्कृत, व्यक्तिहरू सम्मानित
राष्ट्रसंघको मिशनमा भाग लिएपछि सैनिक कल्याणकारी कोषमा रु. ५८ अर्ब जम्मा
युवा स्वरोजगार कोषको दाबी– १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउँछौं